Duulimaadyada Bilecik-Bozüyük YHT waxay bilaabatay (Fiidiyo) | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara11 BilecikBilic-Bozüyük YHT khasaarihii ayaa bilaabmay (Video)
02 / 06 / 2015 11 Bilecik, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY, VIDEOS
Bilecik Bozüyük YHT bilaabay guutadii: Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) ka Ankara hoos ay tareen rakaab siday ugu horeysay shalay markii ugu horeysay ee Bilecik taagan, Istanbul qaaday rakaab ah.
Idaacadda adeegga hal Istanbul- in la furay waqti bilowga sanadka marka line Bilecik YHT YHT ee la soo dhaafay saldhiga ee Ankara maanta, ku-Ankara Istanbul, duulimaadyada Istanbul-Ankara kula geli galo. saacadood 06.00 08 aroortii ka gaashaan Ankara YHT: Waxa aan joojiyay saldhiga markii ugu horeysay ee Bilecik 06. download ee rakaabka ugu horeysay ee Bilecik YHT ka dibna u dhaqaaqay Istanbul in ay qaataan oo rakaab ah. Bilecik ee rakaabkii ugu horreeyay ee Sevilay Akbulut sheegay in YHT markii aad u fiican. Akbulut wuxuu yiri, mar hore ayaan u safray sanado badan oo horeyba mas'uul ka aheyd xaaskeyga. Taasi waa sababta aad u qurux badan. Horta yimaado ayaan ku ahay, laakiin waxaan halkan u yimid furitaanka 9 sano ka hor ayaan meel fadhiistay. Waxaan ka Ankara iman. Ma aqaano inta saacadood ee aan soo gaarnay, marna ma fiirin saacad. Anigu garan maayo inta saacadood ee aan soo gaaray. Laakiin waa raaxo. Aad u fiican, super, aad u fiican
WADAJIRKA MAGAALADA MENSUP
kulmaan hore ee tareenada socda Madaxweynaha Gobolka Bilecik AK Party Kadri Flag iyo murashaxiinta baarlamanka Eldemir Khalil Ramadan Freed iyo Madaxweyne Degmada Central Fikret Karabıyık waxay MySpace kula rakaab ah kuwaas oo si Ankara u safri doona ka Bilecik. Marka ugu horraysa ee wakiilada xisbiga sagootin ah kuwaas oo xnumx'inc duulaan iyo Istanbul 2: 06 30 gaashaan iyo saacadaha: 08 fuushan xubnaha saxaafadda Mufsidiinta degmada Bilecik Bozüyük yht of Bilecik. Waqti marba, 27 gaareen xawaaraha 150.
"MAGAALADA AAD KA QAADINAYAASHA LAGA YIIDO GURIGA GURIGA AAD FASAQA"
Halit Eldemir, oo ah xubin ka tirsan xisbiga AK Parti Bilecik oo ka tirsan xafiiska YHT, ayaa hadal uu soo saaray. Eldemir, ilaa maanta, markii ugu horeysay Bilecik isagoo u dhaqaaqay Bozuyuk waxa uu doonayay in uu noqdo lammaane ku ah farxad this, isaga oo intaa ku daray.
Girdi In 2002, waxa ay isku dayday in ay xaqiijiso mashruuca AK-Train Speed ​​Speed ​​Train ee awood u leh. 2004, wuxuu bilaabay in uu ka shaqeeyo lineka Istanbul-Ankara. 2007 23 April ee Eskisehir - Ankara oo u dhexeeya tareenada xawaaraha sare ayaa bilaabay maxkamad. Tan iyo bilihii ugu horeeyay ee 2009, waxaanu u soo bandhignay tareenka ugu dhakhso badan Eskisehir iyo Ankara si faa'iido u laheyd qarankeena. Geedi socodka soo socdo, waxaad ogtahay in khadkayaga xawaaraha sare ee tareenka Konya ee Eskisehir-Konya loo furay hawlgalka sababtoo ah khadka Ankara-Konya. Intaa waxaa dheer, in shaqooyinka xawiga Istanbul ay si dhaqso ah u socdeen. Laga soo bilaabo July sanadkii hore, waxaan bilaabney duulimaadyo Ankara-Istanbul ah oo ku aadan Pendik. Goobta Bilecik ee geeddi-socodkan, labadaba xaaladaha deegaanka, iyo dhisidda dhismaha aan dhammeystirneyn sababtoo ah waqtiyada aan dhammeystirnayn, ma martiqaadi karaan tareen sare. Laakiin tan iyo maalintii koowaad, xarunteena Bozuyuk wuxuu bilaabay inuu u adeego rakaabkeena labada tiir ee Ankara iyo khadka Istanbul. Xisbiga Our AK in ay awood u yimid in muddada soo socota in ay ku habboon mashruuca tareen-xawaaraha sare ee Turkey ee mashruuca waa mashruuc aad u daran 2023 gool noo dhow boqolkiiba heerka 70 ee dadka Turkiga, waqti isku mid ah, waxaana kuu Malaynaynaa kuwa gaadiidka tareenka xawaaraha gobollada badan oo dalka Turkiga. "
Sheegashada xatooyada shidaalka ee Bozuyuk-Bilecik YHT
Hanti ma guurtada ah oo ku taal Bilecik marka loo eego baaxadda Mashruuca Saadka ee Bozüyük…
Shaacinta hindisaha dhismaha ee TCDD Bilecik iyo Bozuyuk Station ayaa la filayaa in la daabaco
Shirkadda TCDD Bilecik iyo Bozuyuk Garage mashruuca Elite Project ayaa ku guuleystay hindisada
TCDD Bilecik iyo Bozüyük Station Project oo ay la jirto qandaraaska shirkada Elit Proje
Mashruuca Dhismaha Gaadiidka Bilecik iyo Bozüyuk High Speed ​​Train Station
Tareenka xawaaraha sare wuxuu ka baxay Bilecik, waddada u soo jeestay Inegol-Bozuyuk
Mashruuca Mashruuca Beesha Bilecik Bozuyuk Logistics ayaa la dhamaystiray
Bilecik Duruşlu YHT Dalxiisyada ayaa bilaabanaya 8da Juun! Waa kuwan Saacadaha Dalxiis
Koofiyadda Istanbul ee Ankara
Shabakadda Gaadiidka Cusub ee Cusbooneysiinta Xarunta Muhiimka ah ee Ankara
Wasiirka Cusub ayaa booqday goobta dhismaha YTK ee Bilkent-Istanbul
Duulimaadyada Bursaray ayaa bilaabmay (Video)
Mashruuca EIA ee mashruuca Bozuyuk Logistics ayaa bilaabmay
Tababarka Dabka ee Shaqaalaha YHT ee Bozuyuk
Hawlgallo tijaabo ah oo loogu talagalay saacadaha saacadaha saacadaha London (Bilowga)